नेपाल : न्यू कोलोनिज्मको खतरा « Drishti News
नेपाल : न्यू कोलोनिज्मको खतरा
नेपाललाई ‘न्यु कोलोनिजम’मा मात्रै सीमित राख्ने उनीहरूको योजना होइन । ‘न्यु कोलोनिजम’को ग्राउन्ड बनाउने र विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेरेर अर्को कदम चाल्ने रणनीति देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेर्दा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको टकराव बढ्दै गइरहेको छ । चीन पछिल्लो समय जसरी राष्ट्रिय पुँजीको गुणात्मक वृद्धि गर्दै दिगो विकासको दिशामा गइरहेको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि विस्तार हुँदै गइरहेको छ । ठीक विपरीत २००८ पछि अमेरिकाको अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख छ । त्यसले पश्चिमाहरूमा ठूलो छटपटाहट देखिन्छ । चीनसँगै एसियाका कयौँ देशमा विकासको बढ्दो गतिले पश्चिमाहरू अब आर्थिक प्रतिस्पर्धामा उछिन्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्, र फैजी प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख हुँदै छन् । त्यसैकारण उनीहरूले पूर्व र पश्चिमबीचको व्यापारको केन्द्र, तेल र ग्यासको भण्डार भएको, विकासको अत्यन्त सम्भवना रहेको अरब खाडी मुलुकमाथि विगतको दशकमा युद्ध थोपरे । अब आक्रमणको निशाना चाइना बन्दैछ, एसिया बन्दैछ । अमेरिकाले पछिल्लो समय आफ्नो सेनाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ । युद्ध विमानहरू, लडाकु पानीजहाजहरू, सैन्य क्याम्पहरू यही क्षेत्रमा तैनाथ गरिराखेको छ । र, ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ भन्दै जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियादेखि भारतलगायत विभिन्न मुलुकसँग एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनको प्रस्ताव राखेर क्रियाशील भइरहेको छ । यो सबै चीनलक्षित नै हो ।
विगतमा पनि दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, फिलिपिन्स आदि मुलुकलाई प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्रबाट घेराबन्दीको प्रयास गरेको थियो । तर, त्यसक्षेत्रका चिनियाँ जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै बढ्दा घेराबन्दी कामयाव हुन सकेन । त्यसपछि उत्तरतर्फ मंगोलियाबाट प्रयास ग¥यो । तर, त्यो पनि सफल हुन सकेनको छैन । त्यसपछि पश्चिमतर्फबाट प्रयास गर्ने क्रममा उसले चीनकै सिन्चाङ प्रान्त (मुस्लिमहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र) टुक्र्याएर चीनमाथि घेराबन्दी गर्न सकिन्छ भनेर उसले अफगानिस्तान कब्जा गरेर सैन्य अखडा कायम ग¥यो । त्यहाँ पनि उनीहरू सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि अहिले तिब्बतलाई घेराबन्दीको एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर कोशिश गरिरहेका छन् । तिब्बतलाई फुटाउन सकियो भने सिन्चाङ प्रान्त स्वतः विभाजन हुन्छ र चीनको महाशक्ति बन्ने प्रक्रिया रोक्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क देखिन्छन् । तिब्बतलाई फुटाउन सकिएन भने पनि कम्तीमा व्यापारिक मार्गमा ‘सेबोटेज’ गर्ने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ । तिब्बत सिन्चाङ प्रान्त हुँदै, पाकिस्तानको जलालावाद बन्दरगाह, गोदार बन्दरगाह, अरबको छेउको बन्दरगाहसम्मको बाटो निकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्ने चीनको योजना छ । तिब्बतमा गडबढ गराएर त्यो मार्गमा अवरोध गर्दिने, दक्षिणतर्फको ‘साउथ सि’ मा गडबढ मच्चाएर इन्डोनेसिया र मलेसियाको मलका जलडमरु हुँदै हिन्द महासागर हुँदै अरब महासागरसम्मको फैलिएको व्यापार तहसनहस गराउने अभियानमा अमेरिका देखिन्छ ।
कुनै न कुनै रूपमा साम्राज्यवादको सैन्य अखडा नेपालमा कायम भयो भने नेपालको अस्मिता गम्भीर संकटमा पर्नेछ । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको मुलकमा तेस्रो मुलुकका सेना आएर अखडा जमाउने बित्तिकै दुईवटा छिमेकीले किन सहन्छ ? उदाहरणका लागि हिजो सिक्किमको इतिहास हेर्नुस् । भारतले सिक्किम कब्जा गर्ने क्रममा चीन मौन बस्दियो । किन मौन कस्यो त ? सिक्किम यस्तो खालको रणनीतिक विन्दुमा थियो कि त्यहाँका राजा चोख्याल अमेरिकाको दलाल बन्दै गएका थिए । आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्र सिक्किम अमेरिकाको अखडा बन्ने अवस्था आएपछि भारतले कब्जा ग¥यो, चीन मौन बस्यो । भुटानमा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि एउटा रणनीतिक बिन्दु थियो । त्यहाँ पनि पश्चिमा शक्तिले खेल्न सक्छ भन्ने लागेर भारतले भुटानको सेना नै भारतले कन्ट्रोल गर्दियो, पर्यटन पनि कन्ट्रोल गर्दियो । यही रूपमा नेपालमा विदेशी सेनाको अखडा बन्ने अवस्था आयो भने उत्तरले पनि सहँदैन, दक्षिणले पनि सहँदैन । त्यो अवस्थामा नेपालको अस्मिता कहाँ पुग्छ ? अहिलेको स्थिति भनेको ‘न्यु कोलोनिजम’मा मात्रै सीमित छैन । अब बढेर गएर नेपालको अस्मिता नै बच्छ कि बच्दैन भन्ने अवस्थामा पुग्दैछ । त्यसैले यो गम्भीर संकटको अवस्था भएकाले अहिले संयमतापूर्वक सहमति, सहकार्यको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था छ । जुनसुकै मूल्य मान्यतामा पनि देशभक्त, राष्ट्रवादीहरू, सच्चा कम्युनिष्टहरू, क्रान्तिकारीहरू युनिफाइड हुनुको विकल्प छैन । (कुराकानीमा आधारित)